Paul's 1st Letter to Timothy – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / Paul's 1st Letter to Timothy
1 တိမောသေကို 1
1:1 ရှင်ပေါလု, an Apostle of Jesus Christ by the authority of God our Savior and Christ Jesus our hope,
1:2 to Timothy, beloved son in the faith. Grace, mercy, နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, from God the Father and from Christ Jesus our Lord.
1:12 ငါခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သူသူ့ကိုမှဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်, သူသည်ငါ့ကိုသစ္စာရှိသောသူစဉ်းစားပြီ, ဓမ်မအမှု၌အကြှနျုပျကိုအားမရ,
1:13 ယခင်ကငါကျိန်ဆဲသောသူခဲ့သော်လည်း, တစ်ဦးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်, နှင့်ထီလေးစားပြုသော. ထိုအခါမူကားငါသည်ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်ကိုရရှိခဲ့. ငါမသိဘဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့များအတွက်, မယုံကြည်သောအတွက်.
1:14 ဒါကြောင့်ငါတို့သခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်အလွန်တိုးပွါးစေခဲ့သည်, ယေရှုခရစ်၌သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ.
1:15 ဒါဟာသစ္စာရှိသောသူသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏, လူတိုင်းအားဖြင့်လက်ခံမှုကိုခံထိုက်သောသူ, ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်စေဖို့ဒီလောကသို့ကြွလာတော်, သူတို့တွင်ငါပထမဦးဆုံးဖြစ်၏.
1:16 ဒါပေမယ့်ငါမသနားတျောမူသောဤရရှိသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခဲ့, ဒါကြောင့်ငါ၌ပထမဦးဆုံးအဖြစ်, ခရစ်တော်ယေရှုအားလုံးစိတျရှညျသညျးဖော်ပြရန်မယ်လို့, ထာဝရအသက်ကိုရထံသို့ထဲ၌ယုံကြည်မညျ့သူမြား၏သွန်သင်ဘို့.
1:17 သို့ဖြစ်., အသက်အရွယ်အမျိုး၏ရှင်ဘုရင်ရန်, ထိုနေိုငျဖို့, မမြင်ရတဲ့, တိုက်ပိတ်ဘုရားသခငျသညျ, ဂုဏ်အသရေနှင့်ဘုန်းအသရေကိုအစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲဖြစ်. အာမင်.
1 တိမောသေကို 2
2:1 ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုငါတောင်းပန်ပါ၏, ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, တောငျးပနျပါစေ, ပဌနာ, အသနားခံ, နှင့်လူအပေါင်းတို့အဘို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစရာ,
2:2 ရှငျဘုရငျတို့အဘို့အ, နှင့်မြင့်မားသောအရပ်တို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့အဘို့, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့် chastity တစ်ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းဘဝကိုဦးဆောင်စေခြင်းငှါဒါ.
2:5 ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိသည်, ဘုရားသခင်နှင့်ယောက်ျားနှင့်အာမခံတဦးတည်း, လူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသော,
2:6 အဘယ်သူသည်အလုံးစုံတို့အဘို့တစ်ဦးကိုရွေးနှုတ်သောကဲ့သို့မိမိကိုမိမိပေး၏, ၎င်း၏သငျ့လျြောသောအချိန်၌သက်သေအဖြစ်.
2:7 ဒီသက်သေခံချက်, ငါသည်တတရားဟောဆရာနှင့်တမန်တော်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ကြ, (ငါအမှနျတရားစကားပြောဆို, ငါသည်မုသာမပြောသည်) တပါးအမျိုးသားတစ်ဦးဆရာအဖြစ်, ယုံကြည်ခြင်း၌တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုအတွက်.
2:8 ထို့ကြောင့်, ငါသည်လူခပ်သိမ်းသောအရပ်၌ဆုတောင်းချင်, စင်ကြယ်သောလက်ကိုချီ, အမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်ခြင်းများမပါဘဲ.
2:9 အလားတူပင်လည်း, women should be dressed fittingly, adorning themselves with compunction and restraint, and not with plaited hair, nor gold, nor pearls, nor costly attire,
1 တိမောသေကို 3
3:1 ဒါဟာသစ္စာရှိသောသူသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏: ifaman desires the episcopate, he desiresagood work.
3:2 ထို့ကြောင့်, တစ်ဘိရှော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကျော်လွန်ဖြစ်သည်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဇနီးတစ်ဦး၏ခင်ပွန်း, သမ္မာသတိရှိကြလော့, သမ္မာသတိရှိသော, မသနားတျောမူ, စင်ကြယ်, ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျသော, ဆရာတစ်ယောက်,
3:3 မယစ်မူးသော, တိုက်ခိုက်ပေမယ့်ထိန်းသိမ်းရမ, ရန်တွေ့တတ်သောမဟုတ်, လောဘလွန်ကျူးခြင်းမဟုတ်;
3:4 ဒါပေမဲ့ကောင်းစွာမိမိအိမျဦးဆောင်သူတစ်ဦးသည်လူ, အားလုံး chastity နှင့်အတူလက်အောက်ခံနေသောကလေးများရှိခြင်း.
3:5 လူသည်မိမိအိမျတျောကိုဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ဘယ်လိုသိမပါဘူးဆိုရင်အဘို့, သူဘယ်လိုဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များ၏စောင့်ရှောက်မှုယူလိမ့်မည်?
3:6 သူကအသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲမဖြစ်ရပါမည်, စိုးရိမ်., မာနထောင်လွှားခြင်းဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခံရ, သူမာရ်နတ်၏ဝါကျအောက်မှာလဲကြစေခြင်းငှါ.
3:7 သူ့ကိုလည်းပြင်ပ၌နေသောသူတို့ကိုမှကောင်းသောသက်သေခံချက်ရှိသည်ဖို့အတှကျထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သူ disrepute နှင့်မာရ်နတ်၏ကျော့ကွင်းထဲသို့ကျမစေခြင်းငှါဒါ.
3:8 အလားတူပင်, ထောကျမြားစင်ကြယ်သူဖြစ်ရမည်, ကို double-တတ်သောမဟုတ်, တာစပျစ်ရည်ကိုမပေး, ထင်းအမြတ်လိုက်ရှာမဟုတ်,
3:10 ထိုအမှုအရာများသည်အရင်သက်သေပြရပါမည်, ပြီးတော့သူတို့ may ဝန်ကြီး, ပြစ်မှုမရှိဘဲဖြစ်ခြင်း.
3:11 အလားတူပင်, မိန်းမတို့စင်ကြယ်သူဖြစ်ရမည်, မကဲ့ရဲ့တတ်သောသူ, သမ္မာသတိရှိကြလော့, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၌သစ်စာစောငျ့.
3:12 ထောကျမြားဇနီးတစ်ဦး၏ခင်ပွန်းဖြစ်သင့်, ကောင်းစွာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်များဦးဆောင်လမ်းပြသောလူတို့၏.
3:15 ဒါပေမယ့်, if I am delayed, you should know the manner in which it is necessary to conduct yourself in the house of God, which is the Church of the living God, the pillar and the foundation of truth.
1 တိမောသေကို 4
4:12 Let no one despise your youth, but be an example among the faithful in word, in behavior, ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအတွက်, in faith, in chastity.
1 တိမောသေကို 5
5:4 But if any widow has children or grandchildren, let her first learn to manage her own household, and to fulfill, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, her own obligation to her parents; for this is acceptable before God.
5:5 But she who is trulyawidow and is destitute, let her hope in God, and let her be urgent in supplications and prayers, နေ့ညဉ့်.
5:14 ထို့ကြောင့်, I want the younger women to marry, to procreate children, to be mothers of families, to provide no ready opportunity for the adversary to speak evil.
5:18 သမ္မာကျမ်းကပြောပါတယ်များအတွက်: “You shall not muzzle an ox as it is treading out the grain,"နှင့်, “The worker is worthy of his pay.”
5:25 အလားတူပင်, လွန်း, good deeds have been made manifest, but even when they are not, they cannot remain hidden.
1 တိမောသေကို 6
6:4 then he is arrogant, knowing nothing, yet languishing amid the questions and quarrels of words. From these arise envy, contention, ဘုရားကိုလွန်ကျူး, evil suspicions:
6:8 ဒါပေမယ့်, having nourishment and some kind of covering, we should be content with these.
6:11 သင်တို့မူကား,, အိုဘုရားသခင်၏လူ, ဤအမှုအရာတို့ကိုထံမှပြေး, အမှန်တကယ်တရားမျှတမှုကိုလိုက်, ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း, ယုံကြည်ခြင်းအား, မေတ္တာ, သည်းခံခြင်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း.
6:12 ယုံကြည်ခြင်း၏ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်. သင်တို့ကိုခေါ်ပြီဖြစ်သောဖို့ထာဝရအသက်ကိုကိုင်ယူပါ, များစွာသောသက်သေများ၏ရှေ့မှောက်၌ယုံကြည်ခြင်း၏အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အောင်.
6:13 ငါသည်သင်တို့ကိုအားသွင်း, ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌, အဘယ်သူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို enlivens, ယေရှုခရစ်နှင့်ရှေ့တော်၌, အဘယ်သူသည်ပုန္တိပိလတ်အောက်မှာကောင်းသောအလုပ်အကိုင်၏သက်သေခံချက်ကိုပေး၏,
6:14 ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော, irreproachably, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပြန်လာဆီသို့.
6:15 သင့်လျော်သောအချိန်, သူသည်မင်္ဂလာရှိသော Power ကထုတ်ဖေါ်ရကြလိမ့်မည်, ရှငျဘုရငျတို့၏ရှင်ဘုရင်နှင့်မင်းတို့သည်၏သခင်,
6:16 တယောက်တည်းသောသူမသေခြင်းရရှိထားသူ, သူတပိုင်တနိုင်အလငျးကို inhabits, အဘယ်သူကိုဘယ်သူမျှမမြင်ခဲ့ပြီ, မဟုတ်သလိုပင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်, အဘယ်သူကိုမှဂုဏ်အသရေအစွမ်းသတ္တိရှိထာဝရဖြစ်ပါသည်. အာမင်.
6:21 Certain persons, promising these things, have perished from the faith. May grace be with you. အာမင်.
အောက်တိုဘာလ 21, 2019
အောက်တိုဘာလ 20, 2019